Dallas Buyers Club (2013) – Channel Myanmar
R 2013 1h 57min Biography, Drama
IMDB: 8.0/10 425,073 votes
Jean-Marc Vallée, Mark C. Stevens, Urs Hirschbiegel
Dallas Roberts, Denis O'Hare, Donna DuPlantier, Griffin Dunne, Jared Leto, Jennifer Garner, Kevin Rankin, Matthew McConaughey, Michael O'Neill, Steve Zahn
Won3Oscars. Another 82 wins & 82 nominations.
IMDb – 8.0 /10___________Rotten – 93%
1984ခုနှဈကြျောကာလက ရောဂါဆနျးတှေ ကမ်ဘာကွီးထဲကို ထဲထဲဝငျဝငျ ရောကျရှိလာသညျ့ နှဈကာလတှဟေု ပွောရမညျ။အမရေိကလို အထူးလှတျလပျစှာနထေိုငျခှငျ့ရနိုငျသညျ့ လူတနျးစားတှကွေားမှာ လူတှပေဲ သတျမှတျထားသညျ့ ကောငျးမှု ။မကောငျးမှု တှအေား အလှယျတကူ ရရှိခံစားနိုငျသော အခြိနျကာလမှာ အအေို့ငျဒီအကျဈရောဂါကို ဖွဈစသေညျ့ အိတျချြအိုငျဗှီ ဗိုငျးဈရပျပိုးကလေးတှကေလညျး လူသားတှကွေားကို တိုးဝငျရောကျရှိလာသညျ။
ယခုနှဈကာလမြားသညျ အအေိုငျဒီအကျဈ ခတျေဦးလို့ ဆိုရမညျ။လူတနျးစားအကွား ဖွဈပှားလာခြိနျမှာ ဆေးသိပ်ပံအဖှဲ့အစညျးတှအေတှကျ အထူးခေါငျးခဲရသော အခြိနျကာလမြားဖွဈနိုငျသညျ။လိငျ အပြျောအပါး။မူးယဈဆေးဝါးစတဲ့ စိတျလှတျလပျမှု ကို အထောကျအကူပွု သော ယငျးအခကျြအလကျမြားနှငျ့ လှတျကငျးနိုငျဖှယျမရှိသညျ့ လူတနျးစားတှကွေားကို ခကျြခငျြးပြံ့နှံ့လာသညျ။ထဲထဲဝငျဝငျ ထိနျးခြု ပျတားဆီးလို့ရမညျ့ ဆေးတှလေညျး မရှိသေး။လူတှလေညျး တဈဖွု တျဖွုတျသကေုနျသညျ။ဆေးရုံအမြားစုတှငျလညျး အိတျချြအိုငျဗီကနေ အစျေ့အဆငျ့ဖွဈနသေညျ့ လူနာတှနှေငျ့ပွညျ့လို့နသေညျ။
သို့ဖွဈစကောမူ လူထုအကွားဝယျ ပညာပေးနှိုးဆျောမှု နှငျ့ ရောဂါကူးစကျနိုငျသော အကွောငျးရငျးတှကေို ရှောငျကဉျြကာကှယျရမညျ့ အခကျြတှကေို ထိထိရောကျရောကျ ပညာပေးခြိနျမရှိသေးတဲ့အခြိနျမြိုးမှာ အပြျောအပါးခုံမငျသညျ့ ရှနျလို လူတဈယောကျမှာလညျး အိတျချြဗှီစကျကှငျးက မလှတျမွောကျခဲ့။သူခန်ဓာကိုယျထဲမှာ အခြိနျအတျောကွာကတညျးက တိုးဝငျရောကျရှိနပေုံရသညျ့ ဗိုငျးရပျဈပိုးသညျ သူ၏ ခုခံအားကာကှယျမှု နညျးစနဈကို ဘယျအခြိနျကတညျးက တိုကျဖကျြအောငျနိုငျခဲ့ပွီလဲ မသိနိုငျ။ကနဦးကမှ ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှု နညျးပွီး ပပေတေတေနေလေရှေိ့သူဖွဈတော့ ခန်ဓာကိုယျဟာ ထောကျကနျမပေးနိုငျရှာတော့။
ရှနျ တဈယောကျ ဆေးရုံရောကျသှားသညျ။ဆေးရုံရောကျတော့ ဆရာဝနျပွောကွားခကျြအရ သူမှာ အအေိုငျဒီအကျဈရောဂါဖွဈနပွေီတဲ့။သူမကွာခငျသရေတော့မှာလို့ ဆရာဝနျကပွောသညျ။အလှနျဆုံးခံရငျ ရကျသုံးဆယျပဲတဲ့။မိမိ၏ သဆေုံးရမညျ့ ရကျစှဲအတိအကကြို ပွောပွသတျမှတျတာမြိုးကွုံ ရခြိနျမှာ ဘယျလိုလူသားမြိုးက ပွုံးပွုံးကလေးနှငျ့ ခေါငျးညိတျလကျခံနိုငျမှာလဲ။သူမယုံ။ဆရာဝနျတှကေို အျောဆဲသညျ။
သူ့မှာ ဒီရောဂါမရှိနိုငျဟု အကွောကျအကနျ ငွငျးဆနျပမေယျ့ သူ့ခန်ဓာရဲ့ထောကျကူမှု ဟာ သိသိသာသာလြော့နညျးလာတာကိုတော့ သိရှိနသေညျ။ဆရာဝနျပွောကွားခကျြအရ မူးယဈဆေးကို မသနျ့ရှငျးသညျ့ဆေးထိုးအပျနဲ့ မြှဝသေုံးစှဲတာတို့နှငျ့ လိငျတူလိငျကှဲဆကျဆံမှု ကနေ ကူးစကျသညျဟု ပွောပမေယျ့ သူက လိငျတူဆကျဆံရခွငျးအမှု ကို အထူးရှံရှာသူဖွဈသညျ။ဒါပမေယျ့ ပွညျ့တနျဆာမြားနှငျ့ လှနျလှနျကဲကဲ အပြျောအပါးလိုကျစားမှု ကိုတော့ မရှောငျကဉျြခဲ့။ဒီရလဒျကွောငျ့ ကူးစကျရသညျကို သိသှားတဲ့အခါမှာ ကိုကငျးတှကေို ခါတိုငျးထကျရှု ရှို ကျ သုံးစှဲပွနျသညျ။အရကျတှပေိုသောကျသညျ။ခန်ဓာကိုယျက ခါးလယျကပိုငျးဖွတျခံရသော အပငျတဈပငျလို ခှကေသြှားပွနျသညျ။
ရှနျတို့ အအေိုငျဒီအကျဈ ရောဂါဖွဈရသော ကာလသညျ အခွအေနအေဆိုးဝါးဆုံး အခြိနျကာလတဈခုပါပဲ။ယခုခတျေလို အိတျချြအိုငျဗှီ ဗိုငျးရပျဈ ပြံ့နှံ့မှု ကို ထိနျးခြု ပျပေးသညျ့ ART လို ဆေးဝါးတှလေညျး မပျေါပေါကျသေး။ဟိုဆေးက တညျ့နိုးနိုး ဒီဆေးက ကောငျးနိုးနိုး စမျးသပျဆဲအဆငျ့သာ ရှိသေးသညျ။ထိုအခါဝယျ ရှနျတို့လို လူနာတှသေညျ ဆေးကုမ်ပဏီတှေ၏ အစမျးသပျခံလူနာမြိုးတှေ ဖွဈကုနျသညျ။ဆေးရုံကို တဈဖနျပွနျရောကျသောအခါတှငျ သူလို လူနာတှအေတျောမြားမြား ရှိနသေညျကို တှရေ့သညျ။သူ့ခုတငျကပျရကျမှာ နောငျတှငျ ဘဝရုနျးကနျဖျော မိတျဆှဖွေဈလာမညျ့ မိနျးမလြာ ရရှေနျနှငျ့ ဆုံရပွနျသညျ။ဖွဈတညျခံစားနရေသညျ့ ဘဝမှနျးကွပျမှု မြားကွောငျ့ အနာဂါတျပြောကျဆုံးနတေဲ့ ရှနျရဲ့စိတျအစုံဟာ ကွညျလငျမှု အားနညျးနခြေိနျမှာ ကနဦးကပငျ မိနျးမလြာတှဆေိုရငျ မွငျပွငျးကတျလရှေိ့သညျ့အတှကျ အစျေ့ဝဒေနာသညျ ရရှေနျအနားကပျလာခြိနျတှငျ နှငျထုတျပဈသေးသညျ။
အစျေ့ရောဂါသညျမှနျးသိရငျ လူ့အဖှဲ့အစညျးအတှငျးထဲက စှနျ့ပဈပဈပယျသူသာ ပေါမြားသညျ့ လူလောကဝယျ ရှနျ၏ မိတျဆှတှေကေလညျး ထိုနညျးနှငျနှငျပါပငျ။ရှနျကို ရှောငျဖယျကွသညျ။အသားခငျြးထိမှာပငျ ကွောကျရှံ့နကွေ၏။ထိုအခါမြိုးမှာ သူအျောညံဆဲဆိုထားသော မိနျးမလြာ ရရှေနျကမူ စိတျမဆိုးဘဲ သူ၏ခွသေလုံးပုလှေ ရိုးလေးကိုပငျ ကွှကျတကျဝဒေနာခံစားရခြိနျ၌ နှိပျနယျပေးသေးသညျ။
သူ့စိတျထဲတှငျ အကောငျးမွငျစိတျကလေး ဝငျသှားသလိုပငျ။
ရှနျအနဖွေငျ့ မပတေရေဲတော့။လူသားတဈဦးပီပီ သဆေုံးရမယျ့ကာလနောကျဆုံးအထိ စိတျအားတငျးရမညျဆိုတာ နားလညျသဘောပေါကျပုံရသညျ။ဒီလိုမြိုးဘာဆေးဝါးမှ အတိအကြ မရှိသညျ့ စမျးတဈဝါးဝါးကာလမြိုးမှာ မိမိကိုယျကိုယျ မိမိဘာသာ ထိနျးကြောငျးခွငျးကသာ အကောငျးဆုံးပဲ မဟုတျပါလား။ဆေးရုံကဆရာဝနျတှကေနတေဈဆငျ့ AZT ဆေးဝါးကို သုံးစှဲလြှငျ ဝဒေနာသကျသာသညျဟု သိရသညျ။သို့ပမေယျ့ ယငျးဆေးဝါးတှကေလညျး အတိအကအြထောကျအကူပွု တယျလို့ ခိုငျမာတဲ့ရလဒျကလညျး မရှိသေးပေ။ထို့ကွောငျ့ ဝယျယူလို့လညျးမရပေ။
သူခိုးဝယျသညျ။မှီဝဲကွညျ့သညျ။သကျသာမလာ ပိုဆိုးလာသညျ။ထို့နောကျပိုငျးကာလမြားသညျ ရှနျ တဈယောကျ ယငျးဝဒေနာဆိုးကွီးကိုကွံ့ကွံ့ခံကာကှယျသော အထူးသဖွငျ့ ဆရာဝနျတှကေ သတျမှတျပွောကွားထားသညျ့ ယငျးရောဂါဝဒေနာဖွဈပါက နှဈကာလအနညျးငယျအတှငျးမှာ ဧကနျမုခြ သဆေုံးရမညျ ဆိုသညျ့ စကားရပျကွီးကို စိတျဓါတျခိုငျမာမှု ။အထောကျအကူပွု နိုငျသော နညျးလမျးအသှယျသှယျကို ကွိုးစားရှာဖှကော ခိုငျခိုငျမာမာ ရပျတညျပွသညျ့ အစျေ့ဝဒေနာဆိုးကွီးအား ခုတငျပျေါဝယျ တဈရှုံ့ရှံ့ထိုငျငိုကာ အရှူံးပေးမယျ့အစား လကျတှကေ့ကြ တနျပွနျတိုကျခိုကျပွသညျ့ အခြိနျကာလတှကေို ပွဆိုသှားခွငျးဖွဈသညျ။ရှနျသညျ လကျတှဘေ့ဝဝယျ ရှိခဲ့သော အစျေ့ဝဒေနာဖွဈရပျမြားအတှကျ အတုယူရှငျသနျတတျစဖေို့ စံနမူနာပွ ကွိုးစားပွခဲ့သော လူပုဂ်ဂို လျတဈယောကျလို့လညျး သတျမှတျနိုငျပါသညျ။
ယခု ခေါငျးစဉျပါ Dallas Buyers Club ဆိုတာက အစျေ့ဝဒေနာလြော့ပါးဖို့အတှကျ အထူးသဖွငျ့ AZTဆေးဝါးက အလုပျမဖွဈမှနျး သိရှိသှားတဲ့အခါမှာ သူကိုယျတိုငျရှာဖှထေားသော ဆေးဝါးမြားဖွငျ့ ဘဝတူဝဒေနာရှငျမြားအား ဖွနျ့ဝကေုသသော ဆေးဆိုငျတဈဆိုငျလို့ ပွောလို့ရပါမညျ။ထို့နောကျတှငျ မိနျးမလြာအစျေ့ရောဂါဝဒေနာရှငျလေး ရရှေနျနှငျ့အတူ FDA လို ဆေးဝါးထိနျးခြု ပျရေး ကုမ်ပဏီတှရေဲ့ တိုကျခိုကျမှု တှကေိုပါ ရငျဆိုငျကာ ဘဝခရီးကို ဖွတျသနျးကွခွငျး ဖွဈပါသညျ။
ယခုရုပျရှငျတှငျ အစျေ့ဝဒေနာသညျမြားအဖွဈ သရုပျဆောငျသှားသညျ့ မကျသရူး မကျက်ကနောဟေးနှငျ့ မိနျးမလြာဇာတျရုပျအဖွဈ ပါဝငျထားသော ဂရြတျ လကျတိုတို့နှဈဦးလုံး အနဖွေငျ့ အျောစကာဆုကို ဆှတျခူးရရှိခွငျးမှာ အထူးပငျ အံ့သွဖှယျရာ မရှိခြေ။မကျသရူး မက်ကနောဟေးဆိုလြှငျ လူကောငျထှားထှားကွီးနှငျ့ ကွမျးကွမျးဇာတျရုပျမြိုးတှသော လိုကျဖကျသူဟု ရှူ မွငျခဲ့ပမေယျ့ ယခုရုပျရှငျမှာမူ စာတနျးသာထိုးမထားလြှငျ သူဟုပငျ သိနိုငျကွမညျ မထငျပါ။ရောဂါဝဒေနာ နှိပျစကျမှု ကွောငျ့ ပိနျခြုံးကြုံ လှီနသေညျ့ ခန်ဓာကိုယျကလေးနှငျ့ အကောငျးဆုံး သရုပျဆောငျသှားနိုငျခဲ့သလို ဂရြတျလကျတိုမှာလညျး မိနျးမလြာဇာတျရုပျကို ကွညျ့သူတှေ ရငျ့နငျ့အောငျ သနားမိလာအောငျ ပိုလိုသော အိုကျတငျမကျြနှာပေးတှေ အမူအယာတှလေညျး လုံးဝမပါဘဲ ဆေးစှဲနသေူ ။ဘဝတူ ကူညီအားပေးသညျ့ မိတျဆှတှေကေို ဖွူ ဖွူ စငျစငျ ခငျတှယျရှာသူ။တတျအားသမြှ ကူညီပေးတတျသညျ့ မိနျးမလြာလေးတဈဦးအဖွဈ ဇာတျပို့နရောကနေ ကွညျ့ရှု သူစိတျတှဆေီကို စှဲကနျြအောငျ ထားရဈခဲ့ပါသညျ။ထို့ကွောငျ့ပငျ နိုငျငံတကာကခြီး မွှငျသော အနုပညာပိုငျးဆိုငျရာ ဆုတှကေို ထိုကျထိုကျတနျတနျ ဆှတျခူးရရှိခွငျး ဖွဈတနျရာ၏။
ကြှနျတျောတို့လူသားအားလုံးမှာ နစေ့ဉျလိုလို မတျောတဆမှု ကွောငျ့ ဖွဈစေ ။ရောဂါဝဒေနာမြားကွောငျ့ ဖွဈစေ သဆေုံးနကွေရခညျြးသာ ဖွဈသညျ။ထိုအခါဝယျ အစျေ့လို ရောဂါမြိုးကလညျး ရောဂါအထှထှေထေဲက ရောဂါတဈမြိုးမြိုးသာ မဟုတျပါလား။ထိုရောဂါဆိုးကွီးကို မညျသူမြှတော့ လကျခံခငျြကွမှာ မဟုတျတာတော့ သခြောပါသညျ။သို့ရာတှငျမူ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ မိမိတို့ထံကို ရောကျရှိလာတာမြိုးလညျး ကွုံနိုငျပါသညျ။သခွေငျးတရားကတော့ နညျးလမျးအမြိုးမြိုးနှငျ့ ရောကျလာနိုငျတာပါပဲ။အအေိုငျဒီအကျဈကရော တကယျပငျ လူသားတဈယောကျကို မညျသူကမြှ ဘာမှလုပျမပေးနိုငျဘဲ လကျမှို ငျခကြွညျ့ရှု့နရေသညျ့ ရောဂါဆိုးကွီးဆိုတာတကယျပဲလား။ရှနျလို လူသားတဈယောကျကတော့ ကနဦးခတျေကာလမှာပငျ အပွုံးမပကျြဘဲ တှနျးလှနျပွသှားခဲ့ပါသညျ။ဒါဟာ ကိုးဆယျ့ခွောကျပါးသောဝဒေနာထဲက ထူးမခွားနားသညျ့ ဝဒေနာတဈရပျလို သဘောမြိုးသာဖွဈကွောငျး သူကိုယျတိုငျက ကွံ့ကွံခံတိုကျခိုကျ၍ သကျသပွေသှားခဲ့ပါသညျ။
ယခုခတျေကာလတှငျ စောငျ့ရှောကျရေးဂဟောတှေ။စနဈတကြ စမျးသပျထုတျလုပျထားပွီဖွဈသညျ့ ဆေးဝါးတှကေိုလညျး သုံးစှဲရရှိနိုငျပွီ ဖွဈပါသညျ။ရှနျလို ဟကေ့ောငျတှေ ငါမသဘေူးကှ။ငါရကျသုံးဆယျအတှငျး သမှောဆို ။ငါမသဘေူးကှ။ဘဝက ဒီလိုမြိုးကွုံ မယျလို့တော့ ဘယျတှေးမိမလဲ။ဖွဈခငျြတာက မိသားစုကလေးပိုငျဆိုငျခငျြတယျ။မွငျးရိုငျးတဈကောငျပျေါမှာ စီးနငျးဖြျောဖွပွေတဲ့ မွငျးစီးသမား ဖွဈခငျြတာ ဆိုပဲ။သူကတော့ ပွောသညျ့ အတိုငျး ဝဒေနာကွီး ရှိနလေကျြနဲ့ လုပျပွခဲ့သညျ။သမေငျးကို လှောငျပွုံးပွုံးပွသှားခဲ့ပါသညျ။
ကြှနျတျောတို့ရော အရာရာ ရှုံးနိမျ့ အဆိုးတှလောရောကျနှိပျစကျကလူပွု နတေုနျးမှာ ရှနျလို အဲဒီအဆိုးတရားတှကေို ပွုံးပွပွီး လကျလှဲအနိုငျမယူနိုငျဘူးလားဟု မေးရငျးဖွငျ့သာ။
(ဇာတျလမျးအညှနျးကို ကိုညီလငျးအိမျ၏ Facebook Account (https://www.facebook.com/aungphyo.hlaing.9) မှကူးယူဖျောပွပါသညျ။
1984ခုနှစ်ကျော်ကာလက ရောဂါဆန်းတွေ ကမ္ဘာကြီးထဲကို ထဲထဲဝင်ဝင် ရောက်ရှိလာသည့် နှစ်ကာလတွေဟု ပြောရမည်။အမေရိကလို အထူးလွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခွင့်ရနိုင်သည့် လူတန်းစားတွေကြားမှာ လူတွေပဲ သတ်မှတ်ထားသည့် ကောင်းမှု ။မကောင်းမှု တွေအား အလွယ်တကူ ရရှိခံစားနိုင်သော အချိန်ကာလမှာ အေ့အိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါကို ဖြစ်စေသည့် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ဗိုင်းစ်ရပ်ပိုးကလေးတွေကလည်း လူသားတွေကြားကို တိုးဝင်ရောက်ရှိလာသည်။
ယခုနှစ်ကာလများသည် အေအိုင်ဒီအက်စ် ခေတ်ဦးလို့ ဆိုရမည်။လူတန်းစားအကြား ဖြစ်ပွားလာချိန်မှာ ဆေးသိပ္ပံအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက် အထူးခေါင်းခဲရသော အချိန်ကာလများဖြစ်နိုင်သည်။လိင် အပျော်အပါး။မူးယစ်ဆေးဝါးစတဲ့ စိတ်လွတ်လပ်မှု ကို အထောက်အကူပြု သော ယင်းအချက်အလက်များနှင့် လွတ်ကင်းနိုင်ဖွယ်မရှိသည့် လူတန်းစားတွေကြားကို ချက်ချင်းပျံ့နှံ့လာသည်။ထဲထဲဝင်ဝင် ထိန်းချု ပ်တားဆီးလို့ရမည့် ဆေးတွေလည်း မရှိသေး။လူတွေလည်း တစ်ဖြု တ်ဖြုတ်သေကုန်သည်။ဆေးရုံအများစုတွင်လည်း အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီကနေ အေ့စ်အဆင့်ဖြစ်နေသည့် လူနာတွေနှင့်ပြည့်လို့နေသည်။
သို့ဖြစ်စေကာမူ လူထုအကြားဝယ် ပညာပေးနှိုးဆော်မှု နှင့် ရောဂါကူးစက်နိုင်သော အကြောင်းရင်းတွေကို ရှောင်ကျဉ်ကာကွယ်ရမည့် အချက်တွေကို ထိထိရောက်ရောက် ပညာပေးချိန်မရှိသေးတဲ့အချိန်မျိုးမှာ အပျော်အပါးခုံမင်သည့် ရွန်လို လူတစ်ယောက်မှာလည်း အိတ်ခ်ျဗွီစက်ကွင်းက မလွတ်မြောက်ခဲ့။သူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အချိန်အတော်ကြာကတည်းက တိုးဝင်ရောက်ရှိနေပုံရသည့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည် သူ၏ ခုခံအားကာကွယ်မှု နည်းစနစ်ကို ဘယ်အချိန်ကတည်းက တိုက်ဖျက်အောင်နိုင်ခဲ့ပြီလဲ မသိနိုင်။ကနဦးကမှ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု နည်းပြီး ပေပေတေတေနေလေ့ရှိသူဖြစ်တော့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ထောက်ကန်မပေးနိုင်ရှာတော့။
ရွန် တစ်ယောက် ဆေးရုံရောက်သွားသည်။ဆေးရုံရောက်တော့ ဆရာဝန်ပြောကြားချက်အရ သူမှာ အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါဖြစ်နေပြီတဲ့။သူမကြာခင်သေရတော့မှာလို့ ဆရာဝန်ကပြောသည်။အလွန်ဆုံးခံရင် ရက်သုံးဆယ်ပဲတဲ့။မိမိ၏ သေဆုံးရမည့် ရက်စွဲအတိအကျကို ပြောပြသတ်မှတ်တာမျိုးကြုံ ရချိန်မှာ ဘယ်လိုလူသားမျိုးက ပြုံးပြုံးကလေးနှင့် ခေါင်းညိတ်လက်ခံနိုင်မှာလဲ။သူမယုံ။ဆရာဝန်တွေကို အော်ဆဲသည်။
သူ့မှာ ဒီရောဂါမရှိနိုင်ဟု အကြောက်အကန် ငြင်းဆန်ပေမယ့် သူ့ခန္ဓာရဲ့ထောက်ကူမှု ဟာ သိသိသာသာလျော့နည်းလာတာကိုတော့ သိရှိနေသည်။ဆရာဝန်ပြောကြားချက်အရ မူးယစ်ဆေးကို မသန့်ရှင်းသည့်ဆေးထိုးအပ်နဲ့ မျှဝေသုံးစွဲတာတို့နှင့် လိင်တူလိင်ကွဲဆက်ဆံမှု ကနေ ကူးစက်သည်ဟု ပြောပေမယ့် သူက လိင်တူဆက်ဆံရခြင်းအမှု ကို အထူးရွံရှာသူဖြစ်သည်။ဒါပေမယ့် ပြည့်တန်ဆာများနှင့် လွန်လွန်ကဲကဲ အပျော်အပါးလိုက်စားမှု ကိုတော့ မရှောင်ကျဉ်ခဲ့။ဒီရလဒ်ကြောင့် ကူးစက်ရသည်ကို သိသွားတဲ့အခါမှာ ကိုကင်းတွေကို ခါတိုင်းထက်ရှု ရှို က် သုံးစွဲပြန်သည်။အရက်တွေပိုသောက်သည်။ခန္ဓာကိုယ်က ခါးလယ်ကပိုင်းဖြတ်ခံရသော အပင်တစ်ပင်လို ခွေကျသွားပြန်သည်။
ရွန်တို့ အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါဖြစ်ရသော ကာလသည် အခြေအနေအဆိုးဝါးဆုံး အချိန်ကာလတစ်ခုပါပဲ။ယခုခေတ်လို အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့မှု ကို ထိန်းချု ပ်ပေးသည့် ART လို ဆေးဝါးတွေလည်း မပေါ်ပေါက်သေး။ဟိုဆေးက တည့်နိုးနိုး ဒီဆေးက ကောင်းနိုးနိုး စမ်းသပ်ဆဲအဆင့်သာ ရှိသေးသည်။ထိုအခါဝယ် ရွန်တို့လို လူနာတွေသည် ဆေးကုမ္ပဏီတွေ၏ အစမ်းသပ်ခံလူနာမျိုးတွေ ဖြစ်ကုန်သည်။ဆေးရုံကို တစ်ဖန်ပြန်ရောက်သောအခါတွင် သူလို လူနာတွေအတော်များများ ရှိနေသည်ကို တွေ့ရသည်။သူ့ခုတင်ကပ်ရက်မှာ နောင်တွင် ဘဝရုန်းကန်ဖော် မိတ်ဆွေဖြစ်လာမည့် မိန်းမလျာ ရေရွန်နှင့် ဆုံရပြန်သည်။ဖြစ်တည်ခံစားနေရသည့် ဘဝမွန်းကြပ်မှု များကြောင့် အနာဂါတ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ရွန်ရဲ့စိတ်အစုံဟာ ကြည်လင်မှု အားနည်းနေချိန်မှာ ကနဦးကပင် မိန်းမလျာတွေဆိုရင် မြင်ပြင်းကတ်လေ့ရှိသည့်အတွက် အေ့စ်ဝေဒနာသည် ရေရွန်အနားကပ်လာချိန်တွင် နှင်ထုတ်ပစ်သေးသည်။
အေ့စ်ရောဂါသည်မှန်းသိရင် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းထဲက စွန့်ပစ်ပစ်ပယ်သူသာ ပေါများသည့် လူလောကဝယ် ရွန်၏ မိတ်ဆွေတွေကလည်း ထိုနည်းနှင်နှင်ပါပင်။ရွန်ကို ရှောင်ဖယ်ကြသည်။အသားချင်းထိမှာပင် ကြောက်ရွံ့နေကြ၏။ထိုအခါမျိုးမှာ သူအော်ညံဆဲဆိုထားသော မိန်းမလျာ ရေရွန်ကမူ စိတ်မဆိုးဘဲ သူ၏ခြေသလုံးပုလွေ ရိုးလေးကိုပင် ကြွက်တက်ဝေဒနာခံစားရချိန်၌ နှိပ်နယ်ပေးသေးသည်။
သူ့စိတ်ထဲတွင် အကောင်းမြင်စိတ်ကလေး ဝင်သွားသလိုပင်။
ရွန်အနေဖြင့် မပေတေရဲတော့။လူသားတစ်ဦးပီပီ သေဆုံးရမယ့်ကာလနောက်ဆုံးအထိ စိတ်အားတင်းရမည်ဆိုတာ နားလည်သဘောပေါက်ပုံရသည်။ဒီလိုမျိုးဘာဆေးဝါးမှ အတိအကျ မရှိသည့် စမ်းတစ်ဝါးဝါးကာလမျိုးမှာ မိမိကိုယ်ကိုယ် မိမိဘာသာ ထိန်းကျောင်းခြင်းကသာ အကောင်းဆုံးပဲ မဟုတ်ပါလား။ဆေးရုံကဆရာဝန်တွေကနေတစ်ဆင့် AZT ဆေးဝါးကို သုံးစွဲလျှင် ဝေဒနာသက်သာသည်ဟု သိရသည်။သို့ပေမယ့် ယင်းဆေးဝါးတွေကလည်း အတိအကျအထောက်အကူပြု တယ်လို့ ခိုင်မာတဲ့ရလဒ်ကလည်း မရှိသေးပေ။ထို့ကြောင့် ဝယ်ယူလို့လည်းမရပေ။
သူခိုးဝယ်သည်။မှီဝဲကြည့်သည်။သက်သာမလာ ပိုဆိုးလာသည်။ထို့နောက်ပိုင်းကာလများသည် ရွန် တစ်ယောက် ယင်းဝေဒနာဆိုးကြီးကိုကြံ့ကြံ့ခံကာကွယ်သော အထူးသဖြင့် ဆရာဝန်တွေက သတ်မှတ်ပြောကြားထားသည့် ယင်းရောဂါဝေဒနာဖြစ်ပါက နှစ်ကာလအနည်းငယ်အတွင်းမှာ ဧကန်မုချ သေဆုံးရမည် ဆိုသည့် စကားရပ်ကြီးကို စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာမှု ။အထောက်အကူပြု နိုင်သော နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်ကို ကြိုးစားရှာဖွေကာ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်ပြသည့် အေ့စ်ဝေဒနာဆိုးကြီးအား ခုတင်ပေါ်ဝယ် တစ်ရှုံ့ ရှံ့ ထိုင်ငိုကာ အရှူံးပေးမယ့်အစား လက်တွေ့ကျကျ တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ပြသည့် အချိန်ကာလတွေကို ပြဆိုသွားခြင်းဖြစ်သည်။ရွန်သည် လက်တွေ့ဘဝဝယ် ရှိခဲ့သော အေ့စ်ဝေဒနာဖြစ်ရပ်များအတွက် အတုယူရှင်သန်တတ်စေဖို့ စံနမူနာပြ ကြိုးစားပြခဲ့သော လူပုဂ္ဂို လ်တစ်ယောက်လို့လည်း သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
ယခု ခေါင်းစဉ်ပါ Dallas Buyers Club ဆိုတာက အေ့စ်ဝေဒနာလျော့ပါးဖို့အတွက် အထူးသဖြင့် AZTဆေးဝါးက အလုပ်မဖြစ်မှန်း သိရှိသွားတဲ့အခါမှာ သူကိုယ်တိုင်ရှာဖွေထားသော ဆေးဝါးများဖြင့် ဘဝတူဝေဒနာရှင်များအား ဖြန့်ဝေကုသသော ဆေးဆိုင်တစ်ဆိုင်လို့ ပြောလို့ရပါမည်။ထို့နောက်တွင် မိန်းမလျာအေ့စ်ရောဂါဝေဒနာရှင်လေး ရေရွန်နှင့်အတူ FDA လို ဆေးဝါးထိန်းချု ပ်ရေး ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှု တွေကိုပါ ရင်ဆိုင်ကာ ဘဝခရီးကို ဖြတ်သန်းကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ယခုရုပ်ရှင်တွင် အေ့စ်ဝေဒနာသည်များအဖြစ် သရုပ်ဆောင်သွားသည့် မက်သရူး မက်က္ကနောဟေးနှင့် မိန်းမလျာဇာတ်ရုပ်အဖြစ် ပါဝင်ထားသော ဂျရတ် လက်တိုတို့နှစ်ဦးလုံး အနေဖြင့် အော်စကာဆုကို ဆွတ်ခူးရရှိခြင်းမှာ အထူးပင် အံ့သြဖွယ်ရာ မရှိချေ။မက်သရူး မက္ကနောဟေးဆိုလျှင် လူကောင်ထွားထွားကြီးနှင့် ကြမ်းကြမ်းဇာတ်ရုပ်မျိုးတွေသာ လိုက်ဖက်သူဟု ရှူ မြင်ခဲ့ပေမယ့် ယခုရုပ်ရှင်မှာမူ စာတန်းသာထိုးမထားလျှင် သူဟုပင် သိနိုင်ကြမည် မထင်ပါ။ရောဂါဝေဒနာ နှိပ်စက်မှု ကြောင့် ပိန်ချုံးကျုံ လှီနေသည့် ခန္ဓာကိုယ်ကလေးနှင့် အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့သလို ဂျရတ်လက်တိုမှာလည်း မိန်းမလျာဇာတ်ရုပ်ကို ကြည့်သူတွေ ရင့်နင့်အောင် သနားမိလာအောင် ပိုလိုသော အိုက်တင်မျက်နှာပေးတွေ အမူအယာတွေလည်း လုံးဝမပါဘဲ ဆေးစွဲနေသူ ။ဘဝတူ ကူညီအားပေးသည့် မိတ်ဆွေတွေကို ဖြူ ဖြူ စင်စင် ခင်တွယ်ရှာသူ။တတ်အားသမျှ ကူညီပေးတတ်သည့် မိန်းမလျာလေးတစ်ဦးအဖြစ် ဇာတ်ပို့နေရာကနေ ကြည့်ရှု သူစိတ်တွေဆီကို စွဲကျန်အောင် ထားရစ်ခဲ့ပါသည်။ထို့ကြောင့်ပင် နိုင်ငံတကာကချီး မြှင်သော အနုပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုတွေကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဆွတ်ခူးရရှိခြင်း ဖြစ်တန်ရာ၏။
ကျွန်တော်တို့လူသားအားလုံးမှာ နေ့စဉ်လိုလို မတော်တဆမှု ကြောင့် ဖြစ်စေ ။ရောဂါဝေဒနာများကြောင့် ဖြစ်စေ သေဆုံးနေကြရချည်းသာ ဖြစ်သည်။ထိုအခါဝယ် အေ့စ်လို ရောဂါမျိုးကလည်း ရောဂါအထွေထွေထဲက ရောဂါတစ်မျိုးမျိုးသာ မဟုတ်ပါလား။ထိုရောဂါဆိုးကြီးကို မည်သူမျှတော့ လက်ခံချင်ကြမှာ မဟုတ်တာတော့ သေချာပါသည်။သို့ရာတွင်မူ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မိမိတို့ထံကို ရောက်ရှိလာတာမျိုးလည်း ကြုံနိုင်ပါသည်။သေခြင်းတရားကတော့ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနှင့် ရောက်လာနိုင်တာပါပဲ။အေအိုင်ဒီအက်စ်ကရော တကယ်ပင် လူသားတစ်ယောက်ကို မည်သူကမျှ ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ဘဲ လက်မှို င်ချကြည့်ရှု့ နေရသည့် ရောဂါဆိုးကြီးဆိုတာတကယ်ပဲလား။ရွန်လို လူသားတစ်ယောက်ကတော့ ကနဦးခေတ်ကာလမှာပင် အပြုံးမပျက်ဘဲ တွန်းလှန်ပြသွားခဲ့ပါသည်။ဒါဟာ ကိုးဆယ့်ခြောက်ပါးသောဝေဒနာထဲက ထူးမခြားနားသည့် ဝေဒနာတစ်ရပ်လို သဘောမျိုးသာဖြစ်ကြောင်း သူကိုယ်တိုင်က ကြံ့ကြံခံတိုက်ခိုက်၍ သက်သေပြသွားခဲ့ပါသည်။
ယခုခေတ်ကာလတွင် စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာတွေ။စနစ်တကျ စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ထားပြီဖြစ်သည့် ဆေးဝါးတွေကိုလည်း သုံးစွဲရရှိနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ရွန်လို ဟေ့ကောင်တွေ ငါမသေဘူးကွ။ငါရက်သုံးဆယ်အတွင်း သေမှာဆို ။ငါမသေဘူးကွ။ဘဝက ဒီလိုမျိုးကြုံ မယ်လို့တော့ ဘယ်တွေးမိမလဲ။ဖြစ်ချင်တာက မိသားစုကလေးပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်။မြင်းရိုင်းတစ်ကောင်ပေါ်မှာ စီးနင်းဖျော်ဖြေပြတဲ့ မြင်းစီးသမား ဖြစ်ချင်တာ ဆိုပဲ။သူကတော့ ပြောသည့် အတိုင်း ဝေဒနာကြီး ရှိနေလျက်နဲ့ လုပ်ပြခဲ့သည်။သေမင်းကို လှောင်ပြုံးပြုံးပြသွားခဲ့ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ရော အရာရာ ရှုံးနိမ့် အဆိုးတွေလာရောက်နှိပ်စက်ကလူပြု နေတုန်းမှာ ရွန်လို အဲဒီအဆိုးတရားတွေကို ပြုံးပြပြီး လက်လှဲအနိုင်မယူနိုင်ဘူးလားဟု မေးရင်းဖြင့်သာ။
(ဇာတ်လမ်းအညွှန်းကို ကိုညီလင်းအိမ်၏ Facebook Account (https://www.facebook.com/aungphyo.hlaing.9) မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။
File Size : (901 MB)
Running Time : 1hr 57min
Source : 1080p.BluRay.x264.DTS-ROVERS
Translated by May Haruko
Jean-Marc Vallée Mark C. Stevens Urs Hirschbiegel
Dallas Roberts Denis O'Hare Donna DuPlantier Griffin Dunne Jared Leto Jennifer Garner Kevin Rankin Matthew McConaughey Michael O'Neill Steve Zahn
Adam Dunn Arthur Smith Bradford Cox Carl Palmer Craig Borten Dallas Roberts David Lichtenstein Deneen Tyler Denis O'Hare Don Brady Donna DuPlantier Douglas M. Griffin Griffin Dunne Henry Frost Ian Casselberry J.D. Evermore James DuMont Jane McNeill Jared Leto Jennifer Garner Joji Yoshida Jonathan Tabler Juliet Reeves Juliet Reeves London Kevin Rankin Lawrence Turner Lucius Falick Martin Covert Matthew McConaughey Matthew Thompson Michael O'Neill Neeona Neal Noelle Wilcox Rachel Wulff Rick Espaillat Scott Takeda Sean Boyd Steve Zahn Tony Bentley
Option 1 usersdrive.com 901 MB Blu-Ray 720p
Option2yoteshinportal.cc 901 MB Blu-Ray 720p
Option3megaup.net 901 MB Blu-Ray 720p
Option4mega.nz 901 MB Blu-Ray 720p
Option5upstream.to 901 MB Blu-Ray 720p
All Is True(2019) 2018
Hotel Rwanda (2004) 2004
Bridge Of Spies(2016)
Mao Zedong 1949(2019) 2019
A Private War(2018) 2018
Manto (2018) 2018
The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford ( 2007 ) 2007
Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot(2018) 2018
Money Heist: The Phenomenon (2020) 2020
Anarchist from Colony (2017) 2017
Charlie Wilson’s War(2007) 2007